Turkey oo Imaaraadka ku eedeeyey in ay qalalaaso iyo burburin ka wadaan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Turkey oo Imaaraadka ku eedeeyey in ay qalalaaso iyo burburin ka...
Turkey oo Imaaraadka ku eedeeyey in ay qalalaaso iyo burburin ka wadaan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen
Turkey ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeysay inay qalalaase ka wadaan Bariga Dhexe, ayaga oo faro-gelinaya Libya iyo Yemen, eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaaddo xiisadda labada dal.
Wasiirka arrimaha dibedda Turkey, Mevlut Cavusoglu
Wasiirka arrimaha dibedda Turkey Mevlut Cavusoglu ayaa hadalkan sheegay isaga oo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkey ee dagaalka Libya, halkaasi oo ay gaysay shaqaale Militari iyo dagaal-yahanno Syrian ah oo caawiya dowladda dalkaas ee caalamku aqoonsan yahay.
Imaaraadka iyo Masar, oo taageearaya ciidamada Jeneral Khalifa Haftar ee isku dayaya inay qabsadaan caasimadda Libya, ayaa ayaga oo ay wehliyaan Greece, Qubrus iyo Faransiiska, waxay soo saareen bayaan lagu cambaareeyey “faro-gelinta militari ee Turkey ay ka waddo Libya”.
Cavusoglu ayaa taleefishinka Akit ee Turkey u sheegay in Imaaraadka iyo Masar iyo dalal kale oo uusan magacaabin “ay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan” wuxuuna si gaar ah u beegsaday Imaaraadka.
“Haddii aad I weydiiso cidda xasilooni darro ka wadda, cidda qaska abuureysa, waxaan dhahaynaa waa Abu Dhabi, innaga oo aan ka laba labeyn,” ayuu yiri. “Waa xaqiiqo inay yihiin quwadda deganaansho la’anta ku ridday Libya ee burburisay Yemen.
Cavusoglu ayaa sidoo kale ku eedeeyey Imaaraadka Carabta inay taageerayaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, halkaasi oo Turkey ay ku leeyihiin saldhig ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya.
Hadalka Cavusoglu ayaa yimid kadib markii wasaaraddda arrimaha dibedda ee Ankara ay Isniintii ay cambaareysay bayaanka shanta dal, islamarkaana ku eedeysay Faransiiska “inay isku dayayaan inay noqdaan taageeraha isbaheysiga naceybka.”
Imaaraadka Carabta weli kama jawaabin eedeynta Cavusoglu.